Walking onaslackline that’s 840 meters above sea level : ​ကြောက်​စရာ အမြင့်​​ပေမှ လမ်း​လျှောက်​ ခြင်း | Danya Wadi
»ထူးဆန်းထွေလာ»Walking onaslackline that’s 840 meters above sea level : ​ကြောက်​စရာ အမြင့်​​ပေမှ လမ်း​လျှောက်​ ခြင်း
Posted by danyawadi on November 18, 2015 in ထူးဆန်းထွေလာ, Discovery
Walking onaslackline that’s 840 meters above sea level is obviously not terrifying enough for her! She needs some high-heels to get even higher!
Faith Dickey from the US
← IS အဖွဲ့က အစ္စလာမ်၊ မွတ်စလင်တို့နှင့် မပတ်သက်ဟု အိုဘားမားပြော
ရွေးကောက်ပွဲရလဒ် ကန့်ကွက်မှု များအယူခံ ပါက ကော်မရှင် ဆုံးဖြတ်ချက်သာ အပြီး အပြတ်ဖြစ်မည် →